I-5 ye-Cryptocurrency Brokers ephezulu ngoJanuwari 2022-Iiprosesa kunye neengozi zayo ezingatyhilwanga!
Abarhwebi abahlanu abaphezulu be-Cryptocurrency -Ngowuphi uMrhwebi oGqwesileyo? 5
Nokuba ungumrhwebi omtsha okhangela i best crypto broker okwesihlandlo sokuqala, okanye ingcali onamava ekuzingeleni iqonga kukhuphisana, cryptocurrency brokers kumakhulu abo. Nangona oku kukuvumela ukuba ukhethe umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho, ukwazi ukuba leliphi iqonga onokuthi ubhalise kulo akukho lula.
Kweli nqaku, sixubusha eyona ilungileyo Abarhwebi bemali yedijithali ngoku kwimarike yase-UK. Siphinde sihlolisise izinto ezininzi ekufuneka uzijonge xa ​​ukhetha umthengisi omtsha - njengommiselo, iifizi, ukusasazeka, inkxaso yabathengi, kunye neendlela zokuhlawula.
Qaphela: Abarhwebi be-Cryptocurrency basasebenza ngokungalawulekiyo e-UK. Ngale nto ithethwayo, ukuba ujonga ukutyala imali kwi-cryptocurrensets ngeemveliso zeCFD, abathengisi bahlala begcina ilayisensi kwiCCA okanye kwiCySEC.
Ababoneleli aba-5 abafana nezihluzo zakho
Ukuqinisekiswa ngoko nangoko
1 okanye ngcono
kuba $ 250 ufumana
Ukurhweba nge-cryptos yokwenyani kunye ne-crypto CFDs
Umthengisi onelayisensi ene-inshurensi yediphozithi
kuba $250 ufumana
Ii-CFD zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye zinomngcipheko omkhulu wokulahlekelwa yimali ngokukhawuleza ngokusebenzisa amandla. I-75% yee-akhawunti zokuthengisa ezithengisayo zilahlekelwa yimali xa kuthengiswa ii-CFDs kulo mboneleli.
I-75.3% yee-akhawunti zokuthengisa zilahlekelwa yimali xa kuthengiswa ᏟᖴᎠs nalo mboneleli. I-ᏟᖴᎠ's zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye ziza nomngcipheko omkhulu wokuphulukana nemali ngokukhawuleza ngenxa yempembelelo.
Isixa semali yokurhoxisa: $0
Isixa esikhulu se-cryptocurrencies ngokurhweba kweCFD
Idipozithi encinci: $ 20
Ii-CFD zizixhobo ezintsonkothileyo ezinomngcipheko omkhulu wokulahlekelwa yimali ngokukhawuleza ngenxa yobutyebi. I-72.6% yee-akhawunti zomtyali-mali ezithengisayo zilahlekelwa yi-CFDs yokurhweba ngemali nalo mboneleli.
Yintoni i-Cryptocurrency Broker?
Ngamafutshane, i-cryptocurrency broker liqonga labarhwebi elikwi-intanethi elikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iimali ezidumileyo njengeBitcoin, Ethereum, kunye neRipple. Le nkqubo isebenza ngokufanayo nomthengisi wamasheya emveli, kude kuthiwe kuya kufuneka uvule iakhawunti, ufake imali, kwaye uthathe isigqibo sokuba yeyiphi na impahla onqwenela ukuyityala. iya kuququzelela ukuthengwa egameni lakho.
Ngale nto ithethiweyo, zimbini iintlobo zabathengi be-cryptocurrency abasebenza kwisithuba se-Intanethi, kwaye oyikhethileyo iya kuxhomekeka kwiimfuno zakho zobuqu. Oku kubandakanya i-cryptocurrency broker ekuvumela ukuba uthenge iimali zedijithali ngendlela yazo enzima, okuthetha ukuba kuyakufuneka ugcine iimali zakho kwisipaji sangasese.
Ngaphandle koko, abanye abathengisi bakhetha ukusebenzisa ii-cryptocurrency brokers eziququzelela iimveliso zeCFD. Oku kukuvumela ukuba utyalomali kwii-cryptocurrensets ngaphandle kokuba ube ne-asethi esisiseko, oko kuthetha ukuba awudingi kukhathazeka ngokugcinwa. Ngaphaya koko, abathengisi beCFD bayakuvumela ukuba ufikelele kwi-cryptocurrensets emfutshane, ke unokucinga ukuba ixabiso leasethi liza kuhla.
Uhlobo olufanayo kubarhwebi bemveli, kuyakufuneka uhlawule imali ukuze utyalomali kwii-cryptocurrensets. Oku kuhlala kuza ngohlobo lwekhomishini, ebalwa ngokwexabiso lotyalo-mali lwakho. Kuya kufuneka uhlawule oku kuzo zombini iziphelo zorhwebo lwakho. Ukuba usebenzisa i-CFD cryptocurrency broker, uya kuba nakho ukurhweba ngaphandle kwekhomishini. Kuya kufuneka uhlawule umrhumo ngendlela ye sasaza.
Iinkonzo kunye neengozi ze Cryptocurrency Brokers
Inika ukufikelela kumgangatho wezigidi ezigidi zeepawudi yedijithali
Iimfumba zeendlela zokuhlawula zemihla ngemihla ziyaxhaswa
Amandla okufumana imali emfutshane nge-CFDs
Abarhwebi beDijithali yemali basebenza kwisiseko se24 / 7
Amaqonga akhokelayo akuvumela ukuba uqinisekise isazisi sakho ngemizuzu
Imirhumo yotyalo-mali iya isiba nokhuphiswano ngakumbi nangakumbi
Abanye abathengi be-cryptocurrency balawulwa yi-FCA
Ii-cryptocurrensets zodidi oluphezulu lomngcipheko weeasethi
Inani labarhwebi liye laqhekezwa kule minyaka idlulileyo
Abanye abathengi be-cryptocurrency basebenza ngendlela engalawulwa
Iindidi zee-Cryptocurrency Brokers
Zimbini iindidi zabathengi be-imali yedatha esebenza e-UK isithuba-iarhente ezikuvumela ukuba ube ngumnini we-imali eyi-100% ngokuthe ngqo, kunye nabarhwebi abaququzelela utyalomali lwe-cryptocurrency ngeCFDs.
Apha ngezantsi sichaza ukuba zahluke njani ezi ntlobo zimbini zomthengisi.
🥇 Ezakho ii-Cryptocurrensets ngokuqinisekileyo
Ukuba ujonge ukutyala imali kwii-cryptocurrensets ezithandwayo ezinje ngeBitcoin, kwaye unqwenela ukuba ne-asethi eyi-100% ngokuthe ngqo, kuya kufuneka usebenzise ingcali yomthengisi yedijithali. Umbono ogqwesileyo kukuba uza kuthatha ubunini bezo ngqekembe kwaye ke-kuyakufuneka uzigcine kwisipaji sabucala. Oku kuza kunye neenzuzo kunye neengxaki.
Kwelinye icala, ngokugcina ezi ngqekembe kwisipaji sabucala, ziya kuhlala zihlala kwimpahla yakho nokuba ithini. Kananjalo, awuchaphazeleka kukuwa komthengisi. Kwelinye icala, ukugcina ezi ngqekembe ngokwakho kuza neengozi. Kungenxa yokuba abadlali ababi banesakhono sokuqhekeza izipaji zabucala ukude xa umsebenzisi esilele ukufaka ukhuseleko.
Ngokubalulekileyo, eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho kukuzigcina kwisipaji sehardware, ubuncinci kuba ayikaze ixhunywe kwi-intanethi. Oku kuyayenza inkqubo yokuhambisa imali ezinkozo ngaphandle kobunzima, nangona oku kuyindlela yorhwebo ekufuneka uyenzile xa ungumnini wee-imali ezifihlakeleyo.
Utyalomali nge-Cryptocurrency CFD Broker
Izinketho zesibini ezikhoyo kuwe kukusebenzisa i-cryptocurrency CFD broker. Njengokuba kunjalo nakwezinye iimveliso zeCFD ezinje ngestokhwe, ii-indices, kunye nezinto zorhwebo, awuyi kuba ngumnini weasethi eyimali esecaleni. Endaweni yoko, ucinga nje ukuba zeziphi iindlela eziza kuhamba ngazo iimarike.
Umzekelo, ukuba uyayithanda inkangeleko yeBitcoin kwaye ucinga ukuba kungenxa yokunyuka kwexabiso kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo, iiCFD yindlela elungileyo yokuququzelela oku. Ngokubalulekileyo, iiCFD zikuvumela ukuba utyale imali kwiBitcoin ngexabiso eliphantsi kwaye ngokukhawuleza. Ngaphaya koko, ii-CFD zikunika ukhetho lokusebenzisa amandla, kunye nokuzibandakanya kuthengiso olufutshane.
Ngokumalunga neyokuqala, oku kuthetha ukuba unokutyala imali ngakumbi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Kwaye eyokugqibela-kulapho uqikelela khona ngexabiso lemali yedijithali ehambayo phantsi. Isibonelelo esongezelelekileyo sokusebenzisa i-CFD cryptocurrency broker kukuba amaqonga ahlala elawulwa yi-UK's FCA okanye iCySEC eCyprus.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezixhasa i-Cryptocurrency Brokers Support?
Kwixesha elingelide kangako, ukuthenga iimali ezixabisekileyo kunye nemali yokwenyani yayingumsebenzi onzima, ubuncinci kuba abathengisi babengenakukwazi ukufumana ukukhanya okuluhlaza okufunekayo kubakhuphi bentlawulo. Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka ugqithisele imali kumrhwebi ongalawulwayo-uninzi lwazo lwalungeyonto ingaphezulu kobuqhetseba.
Nangona kunjalo, ngomzi mveliso we-cryptocurrency ngoku indawo yentengiso yeebhiliyoni ezigidi, kukho iimfumba zabarhwebi be-imali yedatha abaxhasa iindlela zokuhlawula imihla ngemihla. Oku kubandakanya ukuthanda oku:
Ugqithiselo lweBhanki yaseKhaya
Wire Ucingo lwaMazwe ngaMazwe
Njengoko sixoxa kwicandelo elilandelayo, abathengisi bee-cryptocurrensets ngamanye amaxesha baya kukuhlawulisa imali xa befaka kunye nokukhupha imali. Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba kuyakufuneka uhlangane nesixa esincinci sedipozithi.
Imirhumo ye-Cryptocurrency Broker
Abarhwebi be-idijithali yemali bakwishishini lokwenza imali, ke kukho uluhlu lweefizi ekufuneka uzenzile ngaphambi kokwenza utyalomali. Imirhumo ethile iya kwahluka kwi-broker-to-broker, ke qiniseka ukujonga ngokwakho.
Nokuba ufuna ukuhlawula nayiphi na idipozithi kunye nentlawulo yokurhoxa iya kuxhomekeka kwizinto ezimbini-umrhwebi kunye nohlobo lwendlela yokuhlawula onqwenela ukuyisebenzisa.
Umzekelo, abanye babarhwebi esibacebisayo kweli phepha bayakuvumela ukuba ubeke imali simahla, nangona behlawulisa indlela encinci yokurhoxa.
Abarhwebi abahlawulisa umrhumo wentlawulo bahlala bekwenza oku ngepesenti. Umzekelo, ukuba umthengisi we-cryptocurrency uhlawulisa i-4% ukuze afake imali kwikhadi ledebhithi, kwaye unqwenela ukufaka i- $ 1,000 40, uya kuhlawula umrhumo we- $ XNUMX.
Abanye abathengi be-cryptocurrency baya kukuhlawulisa ikhomishini yorhwebo xa usenza utyalomali. Ukuba benza njalo, oku kuya kuhlawuliswa kwiziphelo zombini zorhwebo. Ngapha koko, oku kubalwa njengepesenti xa kuthelekiswa nemali oyityalileyo.
Masithi umthengisi we-cryptocurrency uhlawulisa ikhomishini yokurhweba eyi-1%
Ufuna ukuthenga i-Bitcoin eyi- £ 500
Uya kuhlawuliswa ikhomishini ye- $ 5 (1% ye- $ 500)
Ufuna ukuthengisa i-Bitcoin yakho xa ixabisa i- $ 750
Uya kuhlawuliswa ikhomishini ye- $ 7.50 (1% ye- $ 750)
Njengoko ubona kulo mzekelo ungasentla, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini xa uqala ukutyala imali kwi-cryptocurrency, naxa uthatha isigqibo sokuthengisa.
Ukusasazeka kubalulekile kuphela ukuba ucwangcisa ukusebenzisa i-cryptocurrency broker egxile kwii-CFDs. Kulabo abangaziyo, ukusasazeka ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa, ke yintlawulo oyihlawula ngokungathanga ngqo.
Usebenzisa i-cryptocurrency broker broker ukutyala imali kwi-Bitcoin
Ixabiso 'lokuthenga' leBitcoin yi- $ 10,000
Ixabiso 'lokuthengisa' leBitcoin yi- $ 10,100
Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini afikelela kwi-1%
Oku kuthetha ukuba kufuneka wenze ubuncinci i-1% kwinzuzo ukuze uphule
Ngokusisiseko, uya kufuna ukusebenzisa i-broker ebonelela ngokusasazeka okuqinileyo, njengoko oku kuya kunceda ukugcina iindleko zakho zokurhweba zincinci.
Qaphela: Uninzi lwabathengi be-CFD ye-cryptocurrency bayakuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekhomishini. Kananjalo, ekuphela kwentlawulo ekufuneka uyihlawule kukusasazeka.
Iimali zedijithali ezixhaswayo kwii-Cryptocurrency Brokers
Nangona uninzi lwabatyali mali bexesha lokuqala befuna ukuthenga iBitcoinNgoku kukho amawaka ezinye ii-cryptocurrensets ezisebenzayo kwimarike. Ngokwesiqhelo kubhekiswa kuzo njenge 'alt-coin', ezi zinokuguquguquka ngakumbi kuneBitcoin, kwaye baneengxaki kumanqanaba asezantsi kakhulu okuhlawula amatyala.
Iingqekembe zeAlt nazo ziza nomngcipheko omkhulu kuneBitcoin. Kwicala leflip, i-alt-coins inamandla amakhulu. Nangona kunjalo, nangona udweliso lwemali nganye yedijithali exhaswa ngabarhwebi be-imali engaphaya kokuxolelwa kweli nqaku, apha ngezantsi uzakufumana ezona ngqekembe zixhaphakileyo kwindawo.
Cash Bitcoin Imali
🥇 I-Binance Coin
Ukuthengisa okufutshane kwee-cryptocurrencies
Ukuthengisa okufutshane kubhekisa kwinkqubo yokuthelekelela ukuba i-asethi iya kwehla ngexabiso. Umzekelo, ukuba ucinga ukuba iBitcoin kungoku nje ixabisiwe kwaye ngenxa yoko-lixabiso liza kwehla kwiiveki ezizayo, kuya kufuneka uyithengise ngokufutshane iasethi.
Ekuphela kwendlela onokwenza ngayo oku kukusebenzisa i-cryptocurrency broker egxile kwii-CFD. Inkqubo isebenza ikakhulu ngokufana nokwenza utyalomali kwimarike esemgangathweni, kodwa ngasemva. Ngamanye amagama, kuya kufuneka kuqala ubeke i-odolo yokuthengisa, emva koko uthenge i-odolo xa uthatha isigqibo sokuphuma kurhwebo lwakho.
Jonga umzekelo ongezantsi wendlela utyalomali olufutshane oluza kusebenza ngayo kumthengisi we-cryptocurrency.
Awunguye umlandeli weBitcoin, ke uthatha isigqibo sokusebenzisa umthengisi weCFD ukuthengisa ngokufutshane iasethi
I-Bitcoin okwangoku ixabiso kwi- £ 5,000 ngemali nganye
Ubeka i-odolo 'yokuthengisa' kwisibonda esipheleleyo se- £ 1,000
Kwiintsuku ezimbalwa emva koko, i-Bitcoin iqala ngetanki kwiimarike kwaye ngoku ixabisa i- $ 4,000 ngengqekembe nganye
Oku kubonisa ukwehla kwexabiso lama-20%
Uthatha isigqibo sokutshixa ngaphakathi kwiingeniso zakho, ke emva koko ubeke i-'othe 'yokuthenga ukuphuma kurhwebo
Wenze inani elipheleleyo le- $ 200 kwinzuzo, esekwe kwi-20% yesiteki sakho se- £ 1,000
Ukuxhamla kwi-Cryptocurrency Brokers
Ngaba unyamezelwano oluphezulu lomngcipheko kwaye unqwenela ukufaka isicelo kumashishini akho e-cryptocurrency? Ukuba kunjalo, unethamsanqa, njengoko ngoku kukho uninzi lwabarhwebi be-cryptocurrency abasebenza kwisithuba se-intanethi esikuvumela ukuba ufake isicelo. Kwakhona, kuya kufuneka usebenzise umthengisi weCFD koku.
Ukuba uhlala e-UK, wena kungenzeka uboshwe yimimiselo ebekwe liGunya lezoKhuseleko laseYurophu kunye noGunyaziso lweeMarike (i-ESMA). Ukuba kunjalo, oku kuthetha ukuba uya kubanjiswa ukuze usebenzise i-2: 1 xa uthengisa nge-imali yedatha. Imida ikwindawo yokukhusela abatyali mali abangafundanga kwilahleko enkulu.
Kwigunya le-2: 1, unokurhweba kabini isixa onaso kwiakhawunti yakho
Ke, ibhalansi ye- $ 500 inokukuvumela ukuba uthenge okanye uthengise i-cryptocurrencies eyi-1,000 XNUMX
Ukuba urhwebo lwakho luyehla ngaphezulu kwe-50% (1/2), urhwebo lwakho luya kupheliswa
Oku kuthetha ukuba uya kuphulukana nayo yonke i-500 yemali yakho
Ukuba isibonelelo se-2: 1 asonelanga kwiimfuno zakho zorhwebo, kuyakufuneka uthathele ingqalelo umthengisi ophuma kwi-cryptocurrency njenge-Crypto Rocket. Abarhwebi abasebenza ngendlela engalawulwa, ke kuya kufuneka unyathele ngononophelo. Ukuba uthe waziphosa emanzini, ungarhweba ngeemali ezixabisekileyo ezifikelela kwi-500: 1, enkulu kakhulu.
Ekunyuseni i-500: 1, unokutyala imali amaxesha angama-500 ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho yomthengisi yedijithali
Ke, ibhalansi ye- $ 500 inokukuvumela ukuba uthenge okanye uthengise i-cryptocurrencies eyi-250,000 XNUMX
Oku kuyakwandisa ukuzuza kwakho nge-500x
Nangona kunjalo, ukuba urhwebo lwakho luyehla ngaphezulu kwe-0.2% (1/500), urhwebo lwakho luya kupheliswa.
Qaphela: Ukunyanzeliswa sisixhobo sokuthengisa esisemngciphekweni ekufuneka sithintelwe ukuba ungumtyali mali weNewbie. Oku kunjalo ngakumbi kumzi mveliso we-cryptocurrency oqhele ukungazinzi okuphezulu.
Ngaba i-Cryptocurrency Brokers ikhuselekile?
Kusenokwenzeka ukuba uvile ngebali eloyikisayo labarhwebi be-imali yedatha bengena ngaphakathi, kunye nabathengi emva koko belahlekelwe yimali eseleyo. Ngelixa inani labarhwebi belikhe layigubungela le lahleko ngaphambili, uninzi alukwenzi oko. Inkxalabo ebaluleke kakhulu kukuba indawo enkulu yomthengisi we-cryptocurrency isebenza ngokungalawulwa.
Kananjalo, awunandawo yokujika ukuba izinto zihamba gwenxa. Iindaba ezimnandi zezokuba abanye abathengisi babambe ilayisensi kwii-UK's FCA okanye iCySEC eCyprus. Abanye banelayisensi kunye ASIC e-Australia, oko kuthetha ukuba uya kuba nolawulo olulawulayo kwimida emininzi.
Ngale nto ithethwayo, singacebisa ukwenza oku kulandelayo xa ukhetha i-cryptocurrency broker entsha ukuqinisekisa ukuba imali yakho ihlala ikhuselekile.
🥇 Ukugcina kubanda: Ukuba usebenzisa i-cryptocurrency broker yemveli ekuvumela ukuba uthenge kwaye ube neengqekembe zemali zedijithali ngokuthe ngqo, kuya kufuneka ujonge ukuba iqonga lisebenzisa ukugcina okubandayo okanye hayi. Kulapho iimali zigcinwa ngaphandle kweintanethi, ke amathuba okuba utyhilo lwangaphandle alukho kwaphela.
Ukuqinisekiswa kwezinto ezibiniUkuqinisekiswa kwezinto ezimbini (2FA) kubonelela ngokhuseleko olongezelelweyo kwiakhawunti yakho yomrhwebi. Ngamafutshane, uya kucelwa ukuba ufake ikhowudi eyahlukileyo ethunyelwa kwifowuni yakho xa usenza umsebenzi weakhawunti. Ngobaluleko, oku kubandakanya ukungena nokutsala imali.
IiWallets zeSigulti-Sig: Ukuba i-cryptocurrency broker isebenzisa ii-wallet ze-sig ezininzi, oku kuthetha ukuba kufuneka utyikityo oluninzi ukuze iqonga lisebenzise ukurhoxiswa. Kwakhona, oku kusebenza njengokhuseleko olukhulu kubahlaseli besithathu
Idatha ebhaliweyo: Ukuba uceba ukufaka imali ngedebhithi yemveli okanye kwikhadi letyala, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iwebhusayithi yomthengisi ibhala idatha. Oku kuyakuthintela iinkcukacha zekhadi lakho ukuba zingangeni kwizandla ezingalunganga.
Uyisebenzisa kanjani i-Cryptocurrency Exchange: Isikhokelo senyathelo nenyathelo
Ke ngoku uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela abarhwebi be-cryptocurrency abasebenza ngayo, ngoku siza kuxoxa ngenkqubo yotyalo-mali kuye esiphelweni. Ngokulandela izikhokelo zenyathelo nenyathelo ezichazwe apha ngezantsi, uya kuba nakho ukutyala imali kwi-cryptocurrency broker ngaphakathi kwemizuzu.
Inyathelo 1: Khetha i-Cryptocurrency Broker
Izibuko lakho lokuqala lokutsalela umnxeba iya kuba kukukhetha umthengisi we-cryptocurrency ohlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto eziphambili ezinje ngokuba ufuna ukuthenga i-cryptocurrensets okanye utyalomali kwii-CFDs, kunye nemirhumo, iindlela zokuhlawula, inkxaso kubathengi kunye nokusasazeka.
Sicebisa ukuba siphonononge eli candelo lingezantsi Ungayikhetha njani i-cryptocurrency broker ukuba ufuna olunye uncedo. Ukuba awunalo ixesha lokuphanda nge-cryptocurrency broker ngokwakho, kutheni ungaqwalaseli ukufaneleka kwelinye lamaqonga aqinisekisiweyo adweliswe kweli phepha?
Nokuba usebenzisa umthengisi wendabuko okanye iqonga leCFD, kuyakufuneka uvule iakhawunti. Inani lolwazi oluqokelelwe kuwe luya kuxhomekeka kuhlobo lomthengisi we-cryptocurrency owukhethileyo.
Ngale nto ithethwayo, ukuba ujonge ukufaka imali kwimali yokwenyani, oko kuya kubandakanya oku kulandelayo:
Ngoku kuya kufuneka uqinisekise isazisi sakho. Oku kukuqinisekisa ukuba umrhwebi uhlala ehambelana nomnikezeli welayisensi, kunye nemithetho yasekhaya yokuchasana nemali ngokungekho semthethweni.
Inkqubo ifuna ukuba ulayishe ikopi ecacileyo yesazisi esikhutshwe ngurhulumente (ipasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba) kunye nobungqina bedilesi. Oku kufanele ukuba yingxelo yebhanki okanye ityala elisebenzisayo elinomhla kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
Nje ukuba iakhawunti yakho iqinisekiswe ngumthengisi we-cryptocurrency, kuyakufuneka ufake imali. Indlela yokubhatala efumanekayo kuwe iya kuxhomekeka kumrhwebi, nangona oku kuhlala kubandakanya ukubhatalwa / kwikhadi letyala okanye kugqithiso lwebhanki.
Abanye abarhwebi bakwaxhasa ii-wallets ezinje ngePaypal kunye neSkrill. Ngaphandle kokuba usebenzisa ugqithiso lwebhanki, zonke ezinye iindlela zedipozithi zikhawuleza.
Inyathelo 5: Tyala imali kwi-Cryptocurrency yakho ekhethiweyo
Ngoku ulungele ukwenza utyalomali kwi-cryptocurrency. Kuya kufuneka kuqala ukhethe i-cryptocurrency ethile ofuna ukuyithenga (iBitcoin, i-Ethereum, njl. Njl.) Emva koko ufake imali onqwenela ukuyityala.
Akukho mfuneko yokuthenga iBitcoin yonke, ukuze uthenge okuncinci ngendlela othanda ngayo-ukuba nje udibana nesixa-mali esisezantsi somrhwebi. Iimali ziya kuthi emva koko zitsalwe kwimali yakho eseleyo, kwaye uya kubona i-cryptocurrensets eyongezwa kwiakhawunti yakho.
Qaphela: Inkqubo yotyalo-mali kwi-CFD ye-cryptocurrency broker ihlala ifana, nangona kunjalo, awuzukulandela inyathelo elingezantsi xa urhoxisa iingqekembe zakho. Kungenxa yokuba iingqekembe azikho, njengoko ucinga nje ngexabiso lempahla yexa elizayo.
Inyathelo 6: Rhoxisa iiNgqekembe kwi-Cryptocurrency Broker
Ngoku kuya kufuneka urhoxise imali yakho esandula ukuyithenga kwi-broker. Nangona uninzi lwamaqonga likuvumela ukuba ugcine iingqekembe zakho kwiwebhusayithi yomrhwebi, singacebisa ngokuchasene noku. Ngobunzima, ukuba umrhwebi watyholwa ngumntu wesithathu okhohlakeleyo, umi emngciphekweni wokuba imali yakho ibiwe.
Kananjalo, kuya kufuneka urhoxe iingqekembe zakho kwisipaji sangasese se-cryptocurrency. Ukwenza oku, intloko entloko kwisipaji sakho kwaye ukope idilesi yakho yesipaji. Nyula ukuba urhoxe kumrhwebi ngokuncamathisela kwidilesi yakho yesipaji kwaye ufake imali onqwenela ukuyikhupha. Iingqekembe kufuneka zifike kwisipaji sakho ngaphakathi kweyure eli-ngokuxhomekeke ekubeni umrhwebi uthatha ixesha elingakanani ukuyenza.
Uyikhetha njani i-Cryptocurrency Broker?
Ngaphambi kokuba ubhalise kwi-cryptocurrency broker, singacebisa ukubuza le mibuzo ilandelayo.
✔️ Ngaba umthengisi we-imali yedatha ulawulwa?
Ngaba umrhwebi wedijithali uyayixhasa indlela oyikhethayo yokuhlawula?
✔Yiphi idipozithi, ukurhoxiswa, kunye neefizi zokurhweba ezihlawuliswa ngumrhwebi we-cryptocurrency?
Ngaba umthengisi uyakuvumela ukuba uthenge i-Bitcoin ngokuthe ngqo, okanye utyale imali kwii-CFD?
✔️ Ngaba umthengisi we-imali yedatha yoluhlu udwelise iimali ozithandayo zedijithali- ezinje ngeBitcoin ne-Ethereum?
Abarhwebi abahlanu abaphezulu be-Cryptocurrency -Ngowuphi uMrhwebi oGqwesileyo?
Ke ngoku ekubeni uyiqonda kakuhle into ekufuneka uyijongile kwi-cryptocurrency broker, ngoku siza kudwelisa amaqonga ethu aphezulu amahlanu e2021. Zonke ezi brokers ziye zahlolwa kwangaphambili liqela lethu lendlu Ababuyekezi, ke qiniseka ukuba la maqonga alandelayo ahlangabezana neekhrayitheriya zethu ezingqongqo.
Ulawulo kunye nentlawulo yokungasebenzi emva kweenyanga ezili-12
Isishwankathelo, ngoku kukho amakhulu wabathengi be-cryptocurrency abasebenza kwisithuba se-intanethi-uninzi lwabo lusebenzela abathengi base-UK. Ngokufunda isikhokelo sethu ngokupheleleyo, kuya kufuneka ngoku ube nezixhobo ezifunekayo zokukhetha umthengisi ohlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho.
Oku kubandakanya iimetrikhi eziphambili ezinje ngommiselo, iikhomishini, iindlela zokuhlawula, kunye nomgangatho. Ngale nto siyithethileyo, sikwadwelise abathengisi bethu abahlanu abaphezulu be-cryptocurrency ka-2021.
Umthengisi we-cryptocurrency liqonga lomntu wesithathu elikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iimali eziphambili zedijithali njengeBitcoin kunye ne-Ethereum.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci kumthengisi we-cryptocurrency?
Ubuncinci bezixa zedipozithi ziya kwahluka kwi-broker-to-broker, ke kuya kufuneka ujonge oku ngaphambi kokuvula iakhawunti. Abanye abarhwebi bayakuvumela ukuba ubeke imali ephezulu kakhulu, ngelixa abanye beya kucela i- $ 200 okanye nangaphezulu.
Zeziphi iintlawulo ezihlawuliswa ngabarhwebi be-cryptocurrency?
Oku kuyokwahluka kuxhomekeka kuhlobo lomrhwebi oyisebenzisayo. Ukuba usebenzisa umthengisi weCFD, ngekhe uhlawule nayiphi na idipozithi okanye umrhumo wokurhoxisa, kwaye awuyi kuhlawula naziphi na iikhomishini. Ukuba ujonge ukuthenga i-cryptocurrencies ngqo, kuyakufuneka uhlawule umrhumo wedipozithi kunye nekhomishini yorhwebo.
Ngaba i-cryptocurrency brokers ilawulwa?
Hayi rhoqo. Ngapha koko, uninzi lweshishini lusebenza ngokungalawulwa. Nangona kunjalo, abo bathengisa iimveliso ze-cryptocurrency ze-CFD kufuneka babambe ilayisensi evela kwi-FCA ukuba bakhonza abathengi base-UK.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezixhasa abathengi be-cryptocurrency?
Abarhwebi be-idijithali yemali bahlala bekunika ithuba lokufaka imali ngedebit / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye udluliselo lwebhanki.
Ngaba i-cryptocurrency brokers iyakuvumela ukuba ufake isicelo?
Ukuba ufuna ukuthenga nokuthengisa ngababini be-imali yedatha ngokunyusa, kuyakufuneka usebenzise umthengisi weCFD okanye iqonga elivela kwi-crypto. Ukuba ukhetha eyangaphambili, uya kufakwa kwinqanaba le-2: 1 kunye nabarhwebi base-UK.
Ngaba ndingazithengisa ngokufutshane i-cryptocurrensets kumrhwebi okwi-intanethi?
Ungathengisa imali emfutshane ngokulula xa usebenzisa umthengisi weCFD.